को हुन त पेस्तोल र गोली सहित मजुवामा पक्राउ पर्ने युवा ? – Gulmiews
को हुन त पेस्तोल र गोली सहित मजुवामा पक्राउ पर्ने युवा ?
गुल्मी, मंसिर ३ । मंगलवार पेस्तोल र गोली सहित गुल्मीको मजुवामा प्रहरीद्धारा पक्राउ परेका एक युवालाई यति वेला जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ । मजुवा ईलाका प्रहरी चौकीका प्रहरीहरद्धारा वुटवलबाट आउँदै गरेको वस रोकेर त्यसमा सवार आँपचौर–१ का २७ वर्षिय लालमणी गौतमलाई एक थान रिभल्वर पेस्तोल र नौं थान गोली सहित पक्राउ गरिएको थियो । उनि पक्राउ परे लगत्तै उनको पृष्ठभुमीवारे सर्वत्र जिज्ञाषा उठी रहेका वेला हामी स्थानियवासी र पारिवारका सदस्यहरुसंग सम्पर्क राखेर जिज्ञाषा मेटाउने प्रयास गरेका छौं ।
पक्राउ परेका गौतम माओवादी द्धन्द्धकालमा तिन चार महिना जति सोही पार्टीमा लागेको उनका ७१ व्र्षिय पिता थानेश्वर गौतमले बताए । ‘म भारतको बैंक अफ ईन्डियामा जागिर गर्थे, यता छोरो माओवादीमा लाग्यो भन्ने सुनेर अत्तालिदै आएर उसलाई त्यस पार्टीबाट छुटाएको हुँ’, पिता गौतमले भने । उनले भक्कानिदै छोराका वारेमा भने, ‘छोरो माओवादी युद्धमा परेर मर्ला, बिग्रेला भनेर त्यस पार्टीबाट छुटाएर ऋषिकेशमा लगेर पढाएँ, होटलको तालिम पनि गराएँ’, त्यस पछि उनले दिल्लीको एक रेष्टुरेण्टमा काम गर्न थालेका हुन् । उक्त रेष्टुरेण्टमा मासिक ३ – ४ हजार रुपैया तलबमा काम गर्न सुरु गरेका उनि अहिले त्यसै रेष्टुरेण्टको म्यानेजर भएका थिए र मासिक १२ हजार सम्म तलव खान्थे । पैसा खर्च गर्दैनथे घर पठाई रहन्थे ।’ उनले थपे–‘ हामी धर्म–कर्ममा विश्वास गर्ने परिवार हौं । मेरो पुर्खेयौली घर दिवु्रङ्ग हो । मैलै दिव्रुङ्गमै गुरुकुल शिक्षा लिएको थिएँ । त्यही अनुसार छोरा छोरीहरुलाई पनि धर्म कर्ममा आश्थावान बनाएको थिएँ । छोरा लालमणी कान्छा छोरा हुन् । उनले भारतमा विरामी परेका वा अन्य करणले पिडित बनेका थुप्रै नेपालीहरुको उद्धार पनि गर्दै आएका थिए । उनले हतियार हिडाले होलान भनेर विश्वास गर्न सक्दिँन खै कसले फसायो थाहा भएन ।’
पिता गौतम सोही बैंकको पेन्सन पकाएर दुई वर्ष अघि देखि घर बस्दै आएको र छोरा गत बैशाखमा घर आएर गएको र तिहारमा छुट्टी नपाएकोले यति वेला आएको बताए । उनि संगै वुटवलबाट सोही वसमा यात्रा गरेका उनका छिमेकी टिकाराम बिश्वकर्मा भन्छन् बुटवल बस पार्कमा उहाँलाई भेटेको हुँ । जति वेला काठमाण्डौबाट आएका आँपचौरकै एक जनासंग उहाँ गफ गर्दै आउनु भएको थियो । उहाँ दश नम्वर सिटमा हुनुहुन्थ्यो म पाँच नम्वर सिटमा थिएँ । उहाँलाई वस चढाउन वुटवलमा रहेका उहाँका दाजु आउनु भएको थियो । एक्कासी मजुवा पुलको मुखमा आएर प्रहरीले बस रोकेर खान–तलासी गर्दा उहाँको झोलाबाट त्यस्तो हतियार फेला पारेर उहाँलाई समातेर लगेको हो ।
बिश्वकर्माका अनुसार लालमणी अहिले सम्म गाउँमा कसै संग झै–झगडा गर्ने गरेका थिएनन् । उनि मिलनसार थिए । दुई छोरी र तिन भाई मध्ये जेठा जापान, माईला विदेश जानका लागि वुटवलमा तालिम गर्दै रहेको वताईएको छ । वुटवलमा रहेका उनका दाजुले भाईसंग करिव आधा घण्टा वसपार्कमा बसेको बताए । पक्राउ परेका गौतम अविवाहित हुन् । दिल्ली देखि नेपाल भारत नाका सम्म भारतिय प्रहरीले पत्तै नपाएको र वुटवल सम्म पनि नेपालको प्रहरीले थाह नपाएको कुरा गुल्मी प्रहरीले कसरी पत्ता लगायो त ? यस सम्वन्धमा गुल्मीका जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले विशेष सुराकीको आधारमा पक्राउ गरिएको बताउँदै आएका छन् ।